आठ वर्षको प्रेम बिहेमा बदलियो – गायक क्षेत्री – MeroJilla.com
आठ वर्षको प्रेम बिहेमा बदलियो – गायक क्षेत्री
। नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको क्षेत्रमा लामो समय बिताएका गायक याम क्षेत्री दुई महिना अघिमात्रै सिर्जना दवाडीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । उमेरको हिसाबमा केही ढिला विवाह गरेजस्तो भएपनि आफू परिपक्क भएर विवाह गरेको र खुशी जीवन बिताइरहेको उनी बताउँछन् ।
गायक क्षेत्रीले गाएका चार सय गीतमध्ये ‘शीतल दिने पिपल समी छ’, ‘घामले नि पोल्दियो जुनले नि पोल्दियो’, ‘आफंै जान कति याद आरै’छ’, ‘मेरी आमा’ बोलको गीतलाई दर्शक तथा श्रोताले मन पराएका गीत हुन् ।
याम जीलाई प्रश्न, एक अर्कामा प्रेम बसेछ है भन्ने कहिले भयो सम्झना छ ?
हाम्रो चिनजान त आजभन्दा आठ वर्षअघिदेखिको हो । सिर्जना काठमाडौंको वनस्थलीमा बस्नेगर्थिन् । हाम्रो कुराकानी सुरुवातमा फेसबुकमा भएको हो । कुराकानी हुँदैजाँदा भेटौं न भन्ने कुरा भयो र सुरुमा वनस्थलीको साईबाबा मन्दिरमा भेटेका थियौं । विस्तारै भेटघाट बढ्दै गयो, कुराहरू साटासाट हुन थाल्यो त्यसपछि उनको केअर हुन थाल्यो, विस्तारै साच्चै नै मायामा परिए छ भन्ने अनुभव हुनथाल्यो र त्यसरी चिनजान भएको डेढ वर्ष पछि मैले नै प्रेम प्रस्ताव गरेको हुँ र विवाह गरेको भर्खरमात्र दुई महिना पुगेको छ ।
गीत गाएरै प्रेममा पार्नु भएको त होइन ?
अब गीतकै प्रभावले मात्र हो भन्न त नमिल्ला । किनकि गीत गाउने गायक भनेर चिनजान भइसकेपछि कुरा गर्दै जाँदा धेरै कुरा हुँदै जान्छन् अनिमात्र मन पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । कतिपय दर्शक तथा श्रोतालाई गीत मन पर्छ तर गायक÷गायिका कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन यतिकै मनपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । उनले मेरा गीतहरू पनि सुन्ने गर्थिन् गीत मन पनि पराउँथिन्, जे होस् गीतले नजिक चाहिँ बनाएको हो ।
पछिल्लो समय लोकगीतको क्षेत्रमा हराउनु भयो भन्नेहरूका लागि के भन्नुहुन्छ ?
पहिलाको तुलनामा पछिल्लो समय मेरा गीत कमै आएका हुन् त्यो स्वीकार्नुपर्छ । पहिलेको समयजस्तो पनि छैन अहिले, क्यासेट, डीभीडीको जमाना थियो । एउटा गीता निकाल्दा सबैजसो दर्शक श्रोताले हेर्नुहुन्थ्यो । अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, पहुँच भएको ठाउँमा निकै छिटो गीत पुग्छ तर पहँुच नभएको ठाउँमा गाह्रो छ । मैले संख्या बढाउने भनेर जस्तोपायो त्यस्तै गीत पनि गाइन त्यसैले पनि संख्यात्मक हिसाबमा मेरा गीत कम छन् र हरायो भन्ने दर्शकका लागि म हराएको छैन, गीतहरू आउनेक्रममा पनि छन् साथ दिनुहोला भन्छु ।
प्रेम विवाह गर्नखोज्ने अन्य जोडीका लागि सन्देश छ ?
मेरो आफ्नो बुझाइमा सबैभन्दा ठूलो कुरा एकअर्कालाई बुझेर विवाह गर्नुस् । केही दिन बोल्दैमा, चिन्दैमा सबैकुरा बुझिन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले दुवैजनाले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्नुस अनि विवाह गर्नुस् ।
गायकसँगको जीवन कत्तिको सुखी र खुशी हुँदैछ ?
सोचेको जति खुशी छु । गायक भइसकेपछि अन्य मानिसहरूको जीवनयापनभन्दा त फरक नै हुन्छ । दैनिकी सेड्युलको कुरादेखि धेरेकुरा फरक हुन्छ त्यसमा पनि खुशी छु ।
दुईजनाबाट तीनजना हुने योजना कहिलेका लागि बनाउनुभएको छ ?
भर्खर त विवाह बन्धनमा बाँधिएका छौं । अहिले नै बालबच्चाको योजना त छैन अब केही समयपछि सोच्नुपर्ला । त्यस्तै विवाह भएको एक÷डेढ वर्षपछि विचार गर्नुपर्ला ।
भर्खर गएको प्रेमदिवस कसरी मनाउनुभयो ?
त्यस्तो स्पेशल त केही भएन तर पनि बिहानै ‘हृयाप्पी भ्यालेन्टाइन डे’ भन्ने शब्दहरूको साटासाट गरी नजिकका केही ठाउँमा घुम्न गयौं । साथीभाइसँग भेटघाट भयो ।